- Ho tonga ny CRM Multichannel:
- Manolotena ny bateria AI:
- Fifandraisana amin'ny Analytics fanta-daza:
- Ny fiakaran'ny CRM ara-tsosialy:
- Tsipiriany momba ny CRM:
- Solon'ny CRM ho an'ny sehatra samihafa:
CRM (Fitantanana ny fifandraisan'ny Customer) dia nahita fandrosoana tsy manam-paharoa amin'ny tontolon'ny varotra virtoaly. Ny fikambanana raharaham-barotra dia miandrandra ny fironana CRM ambony ho an'ny 2017 mba hahazoana tombontsoa amin'ny alalan'ireto modely ireto ary hampiroborobo ny mpanjifany.
Ireo fikambanana mpanavotra dia tsy mamela velively ny ezaka hanehoana ny fankasitrahany ny mpanjifa amin'ny sehatry ny varotra nomerika amin'izao fotoana izao. Ny fankasitrahany dia nahatonga ny fampivoarana ny fampiofanana CRM, izay singa fototra amin'ny biraon'ny varotra amin'ny sehatra rehetra. Ireto misy mari-pamantarana CRM vaovao izay tokony hitombo ao amin'ny 2017:
Satria ny fifandraisana eo amin'ny mpanjifa dia mitarika tsikelikely ny fampielezan-tserasera maro, ny CRM dia ampitomboina ho toy ny modely ambony.
Ny fikambanana ara-barotra dia mitantana ny fepetra tsy hay hadinoina. Ny fanandramana ny traikefa sy ny fanaovana fikarakarana mifanaraka amin'ny antontam-baovao dia fitsapana. Ny batisan-tsolika (AI) mpikirakira ny OMC dia hanome ny tetikasam-pandraharahana lehibe amin'ny fahalalana ary manampy ireo mpizahatany hamorona fanentanana fanavaozana vaovao sy mahatalanjona.
Ny habaka CRM dia nibitsibitsika tamin'ny PA (Predictive Analytics) nandritra ny fotoana fohy. Ny 2017 dia ho vavolombelon'ny tena fanamafisana ny CRM miaraka amin'ny PA amin'ny fandinihana ny tomban'ezaka mety ho lanjany izay hamorona rafi-panarahamaso maromaro kokoa.
CRM dia tsara ny manamboatra ny toerana tsy azo anazavana ny tambazotra eo anivon'ny aterineto ho an'ny varotra an-tsokosoko. 2017 dia hahita ny fiakaran'ny CRM ara-tsosialy amin'ny fampiharana fepetra amin'ny sehatra sosialy sy ny fifehezana amin'ny fahatsapana fanandramana.
Miezaka mandanjalanja tsikelikely ireo klioba ary vonona ny hanery ny hafatra momba ny varotra. Ny 2017 dia hijoro amin'ny fampivoarana ny fahafaha-mikirakira ny fifandimbiasam-peo mifandraika, manara-maso ny sombin-tsakafo madinika ary miresaka amin'ny marketing mahaliana amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny mpanjifa amin'ny fandaharana tsara indrindra, amin'ny fotoana tsara indrindra, miaraka amin'ny hafatra tsara indrindra.
Raha manantena ireo hafatra amin'ny marika ireo mpanjifany dia mila mpandraharaha CRM bebe kokoa ny dokam-barotra. Ny varotra varotra varotra dia hanolotra valiny mahavariana ho an'ny sehatra samihafa, anisan'izany ny fikambanana ara-bola, fikambanana an-tserasera, lalao, sy ny sisa.
Ny fandrosoana ara-barotra mankany amin'ny fitanana ny angon-drakitra dia lasa ilàna marika ara-barotra. Ao amin'ny 2017, ny mpanjifa dia afaka manantena hafatra malaza sy lojika izay mamaly ny fironany sy ny ilainy. Izany dia azo tanterahana amin'ny fanomezana ny fampiofanana CRM sy ny fandaharam-potoana mifanaraka amin'ny fanirian'ny mpanjifa.
Fampandrosoana ny Software: Inona no Atao?